Jaketị antimicrobial na antiviral na-agbadata jaket: nje ahụ bụ obere nje dị mfe nke nwere naanị otu ụdị nucleic acid (DNA ma ọ bụ RNA) nke ga-ebiriri n'ime sel lining wee gbasaa site na mmegharị. Ọ bụ ezie na nje dị mfe na nhazi na obere nha, ha nwere ike ma ...
Mgbochi mgbochi njikwa ọrịa _ Ihe ọmụma mgbochi ọrịa
site ha na 20-06-05
Akwụkwọ akụkọ Coronavirus Ọrịa Mgbochi Ọrịa 1 、 Kedụ ka ọha na eze ga-esi chebe onwe ha pụọ ​​n'ọrịa ọhụrụ nke oyi baa? 1. Belata mbata ndị mmadụ na-abata. 2. Na-ekupụ ụlọ gị mgbe niile n'ụlọ ma ọ bụ na-arụ ọrụ. 3. Na-ekpuchi ihu mgbe niile mgbe ị nwere f ...
site ha na 20-04-05
The Higg Index Mepụtara site na Nkwado Uwe Na-adịgide Adịgide, Higg Index bụ nnukwu ngwaọrụ nke na-enyere ụdị, ndị na-ere ahịa, na akụrụngwa niile aka - na ọkwa ọ bụla na njem nkwado ha - iji tụọ na ...